पोस्टपेड मोबाइलको बिलिङ प्रणाली सम्बन्धमा टेलिकमले भन्यो- ‘वास्तविकता यस्तो हो’ – Ratopati News
पोस्टपेड मोबाइलको बिलिङ प्रणाली सम्बन्धमा टेलिकमले भन्यो- ‘वास्तविकता यस्तो हो’
Ratopati News१० बैशाख २०७७, बुधबार ०६:०३
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेको पोस्टपेड मोबाइलको बिलिङ प्रणाली सम्बन्धमा ग्राहकहरूमा केही भ्रम रहेको पाइएको जनाएको छ । यस बारेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिएको भन्दै टेलिकमले यसबारे स्पष्ट पार्न खोजेको छ ।
यस्तो टेलिकमको स्पष्टोक्ति
के हो ड्यु अमाउन्ट ?
सेवा प्रयोग गरेवापत ग्राहकले कम्पनीलाई बुझाउन बाँकी रकमलाई ड्यु अमाउन्ट भनिन्छ । ड्यु अमाउन्ट भनेको अनपेड बिल र अनबिल्ड अमाउन्टको योगफल हो । उदाहरणका लागि माथिको ९८५१०००००० नम्बरको ग्राहकको मार्च २२ का दिनमा ड्यु अमाउन्ट रु. १६७३ (रु.१४२५ंरु.२४८) हुन्छ । आफ्नो यो सबै बिलिङ रकमको बारेमा जानकारी लिनका लागि *400# डायल गर्न सकिन्छ । यसरी कल गर्दा आउने एसएमएसमा देखिने अभाइलेबल क्रेडिट चाहिं अब ग्राहकले प्रयोग गर्न पाउने रकम हो ।
हाल नयाँ पोस्टपेड नम्बर लिंदा स्वामित्व करवापतको रकम रु. ५००, भ्याटवापत रु. ६५ र क्रेडिट लिमिट वापत रु. ३८० गरी जम्मा रु. ९४५ लाग्दछ । स्वामित्व कर र भ्याटवापतको रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुन्छ भने रु. ३८० रकम ग्राहकले सेवा प्रयोग गर्न पाउने गरी कायम रहन्छ । यो रु. ३८० नै ग्राहकको क्रेडिट लिमिट हो । नयाँ पोस्टपेड मोबाइल लिंदा लाग्ने शुल्कमा समयसापेक्ष परिमार्जन हुँदै आएकोले विभिन्न ग्राहकको क्रेडिट लिमिट पनि फरक–फरक हुने गर्छ ।
पोस्टपेड मोबाइलका लागि मासिक रुपमा न्यूनतम रु. ३८३.०७ रेन्टल चार्ज तय गरिएको छ । यसको अर्थ ग्राहकले योभन्दा थोरै रकमको सुविधा प्रयोग गरेपनि रु. ३८३.०७ तिर्नै पर्छ । यद्यपि कम्पनीले उपलब्ध गराएको कर्पोरेट युजर ग्रुप (सीयूजी) अफर वा अन्य विशेष अफर लिएका ग्राहकहरूको हकमा भने यो रकम फरक हुनसक्छ । पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले धेरै सुविधा उपयोग गर्ने भएकाले यो व्यवस्था पहिलेदेखि नै गरिएको हो । मासिक रूपमा योभन्दा धेरै रकम प्रयोग गर्नेहरूले क्रेडिट लिमिट बढाउँदा राम्रो हुन्छ ।
यही रेन्टल रकमबाटै सामान्य रुपमा फोन गर्न, एसएमएस गर्न वा डाटा चलाउन पाइन्छ । तर पोस्टपेड प्याक बाहेक अन्य छुट्टै प्याक किन्दा थप पैसा तिर्नुपर्छ । पोस्टपेड प्याक लिनका लागि 14152# डायल गरी आफूलाई उपयुक्त प्याक खरिद गर्न सकिन्छ ।
साथै संचित रकम सकिएर कल गर्न रोकिएको पोस्टपेड नम्बरमा रिचार्ज गर्दा जम्मा भएको नेगेटिभ व्यालेन्स कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र ब्यालेन्समा देखिन्छ । सेवा एकतर्फी भएको मोबाइलमा पहिल्यै किनेको प्याक बाँकी रहेछ भने त्यो प्याक चलाउन सकिंदैन र रिचार्ज गरी दुईतर्फी सेवा सुचारु भएपछि बाँकी रहेको प्याक पुनस् प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
पोस्टपेड मोबाइल बिलको जानकारी लिनका लागि *400# डायल गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी कम्पनीको वेबसाइटमार्फत र कम्पनीको एप ‘नेपाल टेलिकम’ बाट पनि हेर्न सकिन्छ । कम्पनीको एपबाट पनि आफूले प्रयोग गरेको पछिल्लो ५ दिनसम्मको सबै बिलको रेकर्ड समेत हेर्न सकिन्छ ।
९ जेष्ठ २०७८, आईतवार १६:५६
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू [सूचीसहित]
३ भाद्र २०७८, बिहीबार १७:५३
१६ फाल्गुन २०७७, आईतवार १३:५४
मे १५ देखि हरेक दिन चीनबाट ५ सय ५० थान अक्सिजन सिलिण्डर ल्याइने
१० जेष्ठ २०७८, सोमबार ०८:२०